Iimveliso Abavelisi & Ababoneleli - China Products Factory
Thina uluhlu imveliso olubanzi kakhulu ukuba bakhonze umthengi ukuba kwiingxowa ezahlukeneyo ukuphakheja ukusuka impahla bulk ukuba istokhwe, kuthuthwe kuze kube nokuthengiswa. Iibhegi zethu upakisha ntli impahla ukusuka 5kgs ukuya 2000kgs ngezininzi iindidi ezifumaneka iinkcukacha eyahlukeneyo ukusetyenziswa zabo zokugqibela.
Ukuze ube efanayo ebalulekileyo ilungu yinxalenye iimveliso zethu, nathi kwakhona ukunika iingxowa ngemihla kunye kweendidi ngeendidi xa ethenga ezikuzo, njl
Izinto ikakhulu ukuba iingxowa zethu zeplastiki (ezinepolypropylene, ipholithini) nomqhaphu. Kulula ukuba ukuze sibe ebanzi kakhulu uluhlu imveliso. Esinokudibanisa le iphe laphu ezahlukeneyo ephothiweyo kunye ilaphu cotton ezahlukeneyo ukuvelisa amaqela amabini kwiingxowa impahla, enye kushishino kunye nenye nesetyenziswa imihla yonke.
Umzekelo, unako ukuvelisa iphe ngelaphu phantse zonke iinkcukacha kunye neendidi thina. Emva koko ukuvelisa iingxowa ukuphakheja njengoko umthengi ngamnye 'imfuneko yeempahla bulk, ngaphezu koko, siya kuqwalasela kwakhona iphe ngelaphu ukuba izingxobo zeplastiki ezisetyenziswa kwiivenkile ezinkulu nezinye izincedisi ezifanelekileyo umxumi imfuneko.
Njengoko, siya onokuvelisa iingxowa ezahlukeneyo ukwanelisa umthengi ezahlukeneyo imfuneko.
Emva iingxowa shishino kunye neengxowa yonke imihla, siye saphuhliswa nezinye
izinto houseware, ezifana iiqhiya, iingxowa impahla, beddings, njalo-njalo ngoku kuluhlu phakathi iimveliso zethu ezinkulu.
Uluhlu lwe YETHU PRODUCT:
Bags A. Packaging for noShishino: iingxowa Big, PP / PE iingxowa ephothiweyo, iingxowa bhanya PE, Mesh iibhegi, iingxowa Paper, iingxowa Cotton, iingxowa OPP lamination.
B.Packaging Bags For Sebenzisa Daily: iingxowa PP evenkileni, iingxowa Cotton evenkileni, iingxowa Iseyile, iingxowa-Oxford, iingxowa jute, iingxowa kupholile, iingxowa Garden, iPhepha bag evenkileni.
C. Housewares: elibala, Iziqhano, ingubo, iingxowa impahla, iingxowa pillowcase, iingxowa yangaphantsi, etc
D. Mining ukuhlola: Incwadi Iphepha note, Orange RC umngxuma iiplagi, ingxowa yeplastiki uziphu, ibhloko zeplastiki, aluminium perma tag, Pin elimakishayo, Test ngesihlungulo, Core yetreyi galv., Calico ibhegi, Veggie yokugalela, neqhina zeplastiki, Suitcase ibhanti, Iziqhano, Mapping ibhatyi, lephepha okwakhiwa, Langa hat.